Nsonaazụ ego Apple na nkeji nke anọ | Esi m mac
Nsonaazụ ego nke anọ nke Apple na-egosi ndekọ ahịa ọhụụ
O yiri ka ọ dị ịtụnanya na ahịa Apple ka nọ n'ọkwa kachasị elu ma ọ bụ opekata mpe nke ahụ bụ ihe anyị na-ahụ ma ọ bụrụ na anyị arapara na ya Nsonaazụ ekwuputara maka nkeji anọ nke afọ anọ a. Site na Cupertino ha na-ahụ ohere ịga n'ihu na-eto na 2016 na-agbakwunye ntọala nke ngwaahịa ndị emeberela ụlọ ọrụ ahụ dị ka iPhone, Mac na ugbu a Apple Watch gosipụtara n'afọ a.
Dika onu ogugu ahia nke ulo oru, nke a putara ulo oru revenue nke $ 25 ijeri, ihe nke Tim Cook kwuru: “A gaghị eleda azụmahịa nke ụlọ ọrụ anya […], enwere m obi abụọ na ọtụtụ ndị maara na anyị nwere azụmaahịa bara uru na ijeri dollar 25 na ụdị ahịa a wuru na mgbali nke mbọ. gara aga ọtụtụ afọ. Maka ugbu a mmetụta anyị pere mpe mana anyị na - eto eto ma na - emiwanyewanyewanye ».
N'oge ogbako ahụ, a jụrụ Tim Cook otu o si chee ka mma n'achụmnta ego, na-eburu n'uche na iwu ụlọ ọrụ ahụ enweghị ahịa dị mkpa karịsịa maka ụdị ndị ahịa a ma e jiri ya tụnyere onye ahụ. The Apple CEO zara na ọ dịghị mgbanwe a na-eme atụmatụ maka ugbu a, ọ na-adabere na ụlọ ọrụ ndị metụtara ahịa ọwa ahịa yana yana "nnukwu" ahịa ọpụpụ zuru ụwa ọnụ nke ụlọ ọrụ si.
Na nkenke, ụlọ ọrụ ahụ rere iPhone iphone 48 na nwetara ijeri $ 51,1 na ego ha nwetara, na-akasi obi karịa ọnụ ọgụgụ afọ gara aga, ma n'okpuru Wall Street na-atụ anya. Isi ihe dị mkpa nke ogbako ahụ bụ ihe ndị a:
Ego ha nwetara maka afọ ụlọnga 2015 bụ ijeri dọla 234, 28% karịrị ijeri 51 karịa otu oge ahụ nke 2014, nke chọrọ ịmata ihe kachasị ukwuu.
Apple rere ihe karịrị nde 300 na ọnwa 12 gara aga.
Emechara nnweta 15.
Apple nwere $ 205 ijeri ego.
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ gbanwere site na gam akporo na iPhone eruola ọnụego ya kachasị elu, 30% na nkeji nke anọ.
Onu ogugu nke iPhone zuru elu na 120% na Chile.
Ihe ndekọ ọhụụ na $ 5,1 ijeri na ntinye ọrụ na nkeji nke anọ
Ngwa 13.000 na Storelọ Ahịa App maka Apple Watch, 1300 n'ime ha bụ ndị Apple Watch.
Nde 40 ndebanye aha nke Apple News
Ihe karịrị nde mmadụ iri na ise na ezinụlọ site na iji Apple Music, nde isii n’ime ha kwụrụ ụgwọ.
61% nke ngwaọrụ dakọtara na iOS 9.
Ihe karịrị ụlọ ọrụ 50 na-arụ ọrụ na ngwa na HomeKit.
Tim Cook: "Apple enweela ụbọchị mbụ ọ na-ere ọgbọ Apple nke anọ."
IPad Pro na-achọ ibubata na Nọvemba.
IPad dị ugbu a nwere 73% nke mbadamba mbadamba nwere ọnụahịa mmalite nke ihe karịrị $ 200 na US.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Nsonaazụ ego nke anọ nke Apple na-egosi ndekọ ahịa ọhụụ
IBM na-echekwa nkezi nke $ 270 maka nkwado na Mac ọ bụla zụtara
Apple weputara OS X El Capitan 10.11.2 beta maka ndi mmepe